के तपाईले फोक्सोमा जाली पर्ने भन्ने सुन्नुभएको छ ? बेलैमा उपचार नगरे मृत्यु समेत हुन सक्छ (भिडीयोसहित) - ज्ञानविज्ञान
फोक्सोमा लाग्ने रोग अन्य रोगको तुलानामा केही जटिल मानिन्छ । फोक्सोमा लाग्ने रोगमध्ये फोक्सोमा जाली पर्ने पनि एक हो । फोक्सोमा जाली पर्ने कारण र बच्न छाति रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश पौडेलका सुझाव यस्ता छन् ।
विभिन्न कारणले फोक्सोमा लामो समय संक्रमण हुदा फोक्सोमा जाली पर्छ । यसको उपचार पनि केही महंगो र समय पनि बढी लाग्ने भएकाले फोक्सोमा रोग लाग्न नदिन निकै सचेत हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा फोक्सोका बिरामीहरु धेरै छन् । अस्वस्थ वातवरण, खानपानका कारण फोक्सोमा जाली पर्ने समस्या बढ्दो छ ।
फोक्सोमा जाली पर्ने प्रमुख कारण:
कुनै पनि कारणले फोक्सोमा लामो संक्रमण हुनु ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु ।
क्यान्सर, दम लगायतका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम पार्ने दीर्घ रोगको नियमित औषधि सेवन गर्नु ।
धुँवा धुलोमा बढी हिड्नु ।
एचआईभी एड्स लाग्नु ।
यी उमेर र काम गर्ने व्यक्तिलाई यसको सम्भावना बढी:
यो समस्या अधिकांशमा उमेर बढेसँगै देखिन्छ वा व्यावसायिक काम सुरु गरिसके पछि देखिन्छ । तर बच्चाहरुमा पनि नदेखिने भने हैन् । ईट्टा उद्योग, चिनि उद्योग, मार्वल, ढुंगा, माटो,लगायतका बढी धुलोका कणहरु हुने काम गर्दा फोक्सोमा संक्रमण हुन्छ । जसले सहज रुपमा फोक्सोबाट श्वास लिने र बाहिर निस्कने प्रक्रियामा अबरोध हुन्छ र अन्ततः बिस्तारै फोक्सोमा जाली पर्न थाल्छ ।
सुख्खा खोकी लाग्ने ।
श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुने ।
छाति भारी भएजस्तो हुने ।
राति गाह्रो हुने ।
शरीर निलो हुने ।
आलस्य हुने ।
बढी धुलोको कण हुने वा धुँवा धुलोमा काम गर्दा त्यसबाट बच्न विशेष साबधानी अपनाउने ।
कुनै पनि लक्षणको शंका लागे तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ।
यो समस्या देखिहाले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नियमित औषधिको सेवन गर्ने ।
यो सर्ने रोग भने हैन । तर एकपटक लागेपछि पूर्ण निको हँुदैन । समयमै थाहा पाएर औषधि सेवन गर्दा रोकथाम गर्न भने सकिन्छ । समयमै उपचार नभए ज्यानै जान सक्नेसम्मको खतरा हुन्छ ।
अन्य थप जानकारी :
बाथ एक प्रकारको दीर्घ रोग हो। यो अटोइम्युन डिजिज हो, अर्थात् शरीरमा आफ्नो रक्त कोषले आफ्नै अंगलाई खराब गर्ने रोग हो।
सामान्य जनमानसमा बाथ भन्नेबित्तिकै युरिक एसिड नै हो भन्ने गलत बुझाइ छ। सबै बाथरोग युरिक एसिड होइन। युरिक एसिडको बाथ महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखिन्छ। हाम्रो शरीरलाई युरिक एसिड जरुरी छ।
युरिक एसिड अलिकति बढी हुँदैमा औषधि खानु पर्दैन। युरिक एसिडले असर गर्न थालेको छ भने मात्र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खानुपर्छ। तर मानिसहरु युरिक एसिड अलिकति बढ्नेबित्तिकै आफंै औषधि किनेर खान थाल्छन्, त्यो गलत हो।
अहिलेसम्म सयभन्दा बढी प्रकारका बाथ रोग पत्ता लागिसकेका छन्। तीमध्येको एउटा रोग युरिक एसिड हो।
नेपालमा मुख्यगरी तीन प्रकारका बाथरोग देखिएको छ। पहिलो गठिया बाथ, दोस्रो जोर्नी खिइने बाथ त्यसपछि मांशपेशीको बाथ। यीमध्ये आज हामी गठिया बाथ रोगबारे चर्चा गर्दैछौं।
गठिया बाथ रोग जुनसुकै उमेरका व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ। तर मुख्यगरी ४० वर्ष कटेपछि यो रोग देखिन्छ। यो रोग पुरुषमा भन्दा महिलामा तीन गुणा बढी देखिन्छ। बाथको सटिक कारण पत्ता नलागे पनि वातावरणीय, जेनेटिक, विभिन्न संक्रमणका कारणले हुनसक्छ। धूमपानले पनि बाथ बढाउन सक्छ।
गठिया बाथ रोग वंशाणुगत चयन होइन। तर परिवारमा अघिल्ला सदस्यहरुलाई बाथ छ भने पछिका सन्तानलाई यो बाथ हुने जोखिम बढी हुन्छ। अन्य व्यक्तिभन्दा यस्तो परिवारका सदस्य तीन गुणा बढी जोखिममा भने हुन्छन्।
हात–खुट्टाका साना–ठूला जोर्नी दुख्ने, सुन्निने, बिहान उठ्दा हात कक्रक्क पर्ने गठिया बाथका सुरुवाती मुख्य लक्षण हुन्। यी लक्षण देखिएपछि समयमै उपचार भएन भने विस्तारै जोर्नी बांगिँदै जान्छ। गठियाले मुख्यतया जोर्नी बांगिने र जोर्नी जोडिँदै जाने हुन्छ।
हामीले बिरामीको लक्षण हेरी चयन पत्ता लगाउने हो। आवश्यक विभिन्न रगत परीक्षण जस्तै आरएफ, एसीपीए गरी उपचार सुरु गर्छौं। त्यसले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने थाहा हुन्छ।
गठिया बाथर भएपछि आँखा रातो हुने, सुन्निने, फोक्सोमा जाली पर्ने, मुटुमा समस्या हुनसक्छ। त्यसैले समयसमयमा आँखा जाँच, मुटु, फोक्सोको जाँच गराउनुपर्छ।
जोर्नीमा बाथ छ वा छैन, छ भने कति सिभियर छ भनेर हेर्न अल्टोसोनोग्राम गरिन्छ। यो नयाँ प्रविधि नेपालमा पनि आइसकेको छ।
आजकल जोर्नी दुख्ने, सुन्निने र बिहान उठ्दा हात कक्रक्क पर्ने समस्या भयो भने अस्पताल आउने मान्छेहरु पनि धेरै छन्।
किनकि आजकल धेरै कुरा इन्टरनेटबाट हेरेर पनि कति आउनुहुन्छ। यो क्रम सहरमा बढी छ। तर गाउँघरमा अझै पनि रोग लागेको धेरै वर्षपछि मात्र सही चिकित्सककहाँ पुग्ने गरिन्छ। अनि धेरैले विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि खाने, चिकित्सकको सिफारिसबिना नदुख्ने औषधि खाने गर्छन्। जसले केही समयलाई राम्रो गरे पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्या ल्याउँछ।
गठिया बाथको मूल उपचार भनेकै बाथ नियन्त्रणका औषधि हुन्। यस रोगमा बिरामीले कुनै खानेकुरा बार्नुपर्ने पर्दैन। तर बाथ रोग भन्नेबित्तिकै दाल, गेडागुडी, टमाटरलगायतका खाद्य पदार्थ बार्ने धेरै छन्। खाना बार्दा शरीरलाई चाहिने पोषकतत्व नपुगेर समस्या झन् बढ्छ।
गठिया बाथको औषधि खाइरहेका महिलाले गर्भवती हुने योजना बनाउनुभन्दा अघि चिकित्सकसँग परामर्श लिनैपर्छ। गर्भवती हुन योजना बनाउँदा खाइरहेको केही औषधिको तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ। बिरामीले खाइरहेको केही औषधिले बच्चालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ।
कुनै पनि बाथ रोग पूर्ण रुपमा निको त हुँदैन। तर जुन स्टेजमा छ, त्यसलाई निन्त्रयण गर्न सकिन्छ। सुरुवाती लक्षण देखिँदा उपचारमा जान सकेमा औषधिले चाँडो प्रभाव देखाउन सक्छ। र जोर्नी बांगिनबाट जोगाउन सकिन्छ। गठिया बाथ रोग दीर्घकालीन रोग भएकाले औषधि पनि दीर्घकालीन रुपमै खानुपर्ने हुन्छ। गठिया बाथरोग भएका व्यक्ति चिसोबाट बच्नुपर्छ। धूमपान नगर्ने, धूमपान भएको ठाउँमा पनि नबस्ने गर्नुपर्छ।
औषधिको साइड इफेक्ट र रोगको अवस्था हेरेर औषधिको मात्रा मिलाउन बिरामी हरेक तीनदेखि चार महिनामा नियमित फलोअपमा आउनुपर्छ। बेलाबेलामा रगत, कलेजो र मिर्गौलाका जाँचहरु पनि गरिरहनुपर्छ।
सयभन्दा बढी प्रकारका बाथ रोगहरूमध्ये गठिया बाथ अर्थात ‘रुमाटोइट आर्थराइटिस’ सबैभन्दा धेरै देखिने बाथ रोग मध्येको एक हो । यसले हाम्रो शरीरको विभिन्न जोर्नीहरुमा असर पार्ने गर्दछ ।
प्राय गरेर ५० बर्ष पछिका व्यक्तिहरुलाई यो बाथको संक्रमण बढी देखिन्छ । त्यसभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई नहुने भन्ने चाही होइन । अर्थात यो रोग लाग्न उमेरको सीमा छैन ।
गठिया बाथ पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनहरुले गठिया बाथ पुरुषमा भन्दा महिलाहरुमा दुई देखि तीन गुणा बढी भएको देखाएको छ ।
गठिया बाथले सानो जोर्नीहरु जस्तै हात खुट्टाका औँलाका जोर्नी देखि देखि ठूला जोर्नीहरु जस्तै घुडाका जोर्नीहरुमा यसले असर गर्दछ ।
के कारणले हुन्छ गठियाबाथ ?
बाथ रोग अटो इम्युन डिजिजको हो । त्यसकारण यहि नै कारणले यो रोग लागेको हो भनेर भन्ने अवस्था छैन । अर्थात बाथ रोग लाग्नुको सटिक कारण पत्ता लागेको छैन ।
गठिया बाथ विभिन्न कारणले हुने गर्दछ । जस्तै : जस्तै कसैलाई जेनेटिक्स, र संगसंगै इन्भाइरोमेन्टल कारण पनि भइराखेको हुन्छ ।
पुर्खाहरुमा बाथको समस्या थियो वा छ भने सन्ततीहरुलाई हुने सम्भावना दुई देखि तीन गुणासम्म बढी हुन्छ ।
यो बाथको समस्या कुनै क्षेत्रमा बढी कुनै क्षेत्रमा कम देखिने गरेको छ । जस्तै : एसियन राष्ट्रका मानिसहरुको तुलनामा अफ्रिकन मानिसहरुमा कम समस्या देखिन्छ । अर्थात एसियनहरुमा बढी देखिन्छ । अझ नर्थ अमेरिकनहरुमा त एसियनहरुमा भन्दा बढी देखिन्छ ।
गठिया बाथबाट प्रभावितको संख्या कति ?
नेपालमा गठियाबाथबाट प्रभावितको संख्या कति छ ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी त्यससम्वन्धी अध्ययन् नै भएको छैन । विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषतमा कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतमा गठियाबाथ हुने गरेको अनुमान गरेको छ ।
त्यस हिसावले नेपालमा करीब ३ लाख मासिन यो रोगबाट प्रभावित छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अस्पतालहरुको विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै केसहरु यहि गठियाबाथका आउने गर्दछन् ।
हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने, सुनिने तथा बिहानीपख अररो हुने यसका प्रमुख लक्षण हुन्। यति मात्र नभई यसले ज्वरो आउने, आलस्य हुने, चाँडै थाक्ने तथा गल्नेजस्ता लक्षण पनि देखाउन सक्छ ।
कसै कसैमा शुरुमा जोर्नी नदुख्न पनि सक्छ । अलि अलि ज्वरो आउने खाना नरुच्ने, जीउ सन्चो नभएको जस्तो हुने । जीउहरु दुख्ने मात्रै लक्षण पनि हुनसक्छ ।
विहान उठदा अरठ्ठ हुने । जोर्नी नखुलेको जस्तो हुने । मुठी कस्न नमिल्ने आदि । जाम जाम भएको जस्तो हुने । जोर्नीहरु सुन्निे आदी संकेतहरु देखा पर्नसक्छ । सबैको जोर्नीहरु सुनिन्छ भन्ने पनि छैन तर धेरै जसोको सुनिन्छ । बढी विहान तिर बढी अनुभव हुन्छ । मुठ्ठी कस्न नसकेको जस्तो ।
विहान बढी दुख्छ । दिउसो हुँदै गएपछि जति हातगोडा चल्छ दुखाई कम हुन थाल्छ र जाम भएको जस्तो जोर्नीहरु खुल्दै गएको अनुभव हुन्छ ।
बाथ रोग भएको मानिसले धूमपान नगरेको वेश । बाथ रोग भएको मानिसले धूमपान नगरेको वेश । किनभने बाथ भइसकेको व्यक्तिले धूमपान गर्दा उसलाई थप जटिल अवस्था अर्थात सिभिअर हुने सम्भावना अत्यन्तै बढी हुन्छ । त्यस्तै अरु संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ ।
बाथ रुघा खोकी जस्तो पूर्ण निको हुने रोग होेइन । यो एक पटक लागि सकेपछि पूर्ण निर्मूल हुँदैन ।तर यसलाई नियन्त्रणमा राख्न भने सकिन्छ । बाथ हुनु अघि नै रोक थाम गर्छु भन्ने पनि छैन तर जव लक्षणहरु देखिन थाल्छ तत्काल उपचार गरियो भने यसलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।
समयमै उपचार भएन भने जोर्नीहरु विग्रन पनि सक्छ । त्यसका साथै यसले मुटुमा फोक्सोमा मिर्गौलामा असर गर्न सक्छ । अटो इम्युन डिजिज भएकोले निको चाँही हुँदैन । तर औषधि खाएर यसलाई हामी नियन्त्रणमा राख्न भने सक्छौँ ।
बाथका विरामीले औषधि कहिलेसम्म खाने ?
गठियाबाथमा पनि रोग पत्ता लगाउन विभिन्न सेरोलिकल टेष्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । एन्टी सिसिभी व्लड टेष्ट यदि पोजेटिभ छ भने गठियाबाथ अलि गम्भीर किसिमको हो भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ । र औषधि जिन्दगीभर नै खानुपर्ने हुन्छ ।
यो बाथमा रोगको अवस्था अनुसार औषधिको मात्रा र परिमाण थपघट वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । कसैलाई सामान्य औषधिले चल्छ कसैलाई अलि कडा खालको औषधि दिनुपर्ने हुन्छ ।
गठिया बाथ भएकाहरुले जिन्दगीभर नै औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ । अधिकांशलाई रोग देखिएपछि जिन्दगीभर नै खानुपरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । एउटै अवस्थामा मात्रै औषधि रोक्न सकिन्छ, त्यो भनेको बाथ एकदम न्युन छ, दुखाई छैन । अर्थात ६ महिनासम्म कुनै पनि किसिमको दुखाई भएन भने र रगतको रिपोर्टमा पनि बाथरोगको लक्षण छैन भने बन्द गरेर हेर्न सकिन्छ ।
यदि छ महिना देखि मानिसमा बाथ सम्वन्धी कुनै पनि किसिमको समस्या छैन भने त्यस्तो अवास्थामा औषधिहरु विस्तारै कम गर्दै लैजान सक्छौँ र औषधि बन्द नै पनि गर्न सक्छौँ । र यो प्रतिशत एकदमै न्युन हुन्छ । यो रोग लागेका अधिकांशले भने औषधि सेवन गरेकै हुन्छन् ।
Don't Miss it गर्भधारणका लागी कस्ता खानेकुरा खाने ? गर्भावस्थामा महिलाले जान्नैपर्ने पर्ने ३० कुराहरु
Up Next व्रोइलर पाल्दा प्रत्येक सप्ताह विचार गर्नुपर्ने कुराहरु (साप्ताहिक तालिका सहित )